Layma's World: July 2008
1. Blogger အမည် - မျှားပြာ ( ပြာတွေကို မျှား နေတဲ့ သူဆိုပဲ… ပြာတွေကို မျှားမှ တော့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ဘယ်ရှိပါ့မလဲ ) ။
2. လူအမည် - မသိ ။
3. သူငယ်ချင်းများက ခေါ်သောအမည် - ပြာယာခတ် ၊အပြာရောင်မျှား၊ ချက်ကြီး ၊ စုတ်ဖွား ၊……( ရှိသေးရင် ထပ်ဖြည့်ကြပါ) ။
4. Blog အမည် - သန်းခေါင်ယံအတွေး ( တရေးနိုးသော် အကြံပေါ် … ပေါ်သည့်အကြံ ဘလော့ရေးရန် .. ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပေးထားပုံရတယ်.. ခုတလောတော့ တရေးမနိုးတာလား …တရေးမှမအိပ်တာလားတော့မသိ… သန်းခေါင်ယံအတွေးတွေ မတွေ့ ရတာကြာပေါ့ .. ) ။
5. ဒီလိုလူစား - အားလုံးကို အဆင်ပြေစေချင်တဲ့၊ ရိုးရိုးသားသားနေချင်တဲ့ လူထဲက လူတစ်ယောက်။
6. လက်သုံးစကား - အဆင်ပြေပါစေဗျာ ။
7. သူလိုချင်တာ - ရင်ဘတ်ထဲက အသံတွေ ။
9. သူ့ ဘေးမှာ - မီးမီး ( ကြောင်မလေး) ။
Posted by lay-ma at 6:14 AM 17 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 3:01 AM 24 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 4:56 AM7comments Links to this post
Posted by lay-ma at 3:36 AM 22 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 5:51 AM 19 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 4:53 AM 13 comments Links to this post
ငါ့ပို့ စ်မှာ ငါ့ မိတ်ဆွေတွေ “ ငါ ” အကြောင်း ထပ်ရေးသွားကြတာ ...
ဒီရပ်ဝန်းကို ငါ ဘယ်လို မျက်နှာလွဲရမှာလဲ ...။
Posted by lay-ma at 6:41 AM 15 comments Links to this post
ငါ့ကိုယ်ငါ မျက်စိရှက်လာလို့…
အားလုံး အိပ်စက်သွားအောင် ( Sleeping Beauty ထဲကလို )
ငါ ကိုယ်တိုင် ကျိန်စာတိုက်လိုက်တယ်
အိပ်တော့ ကမ္ဘာငယ် …။
Published posts ( 188 ) Private ( 1 )
Posted by lay-ma at 2:02 AM 16 comments Links to this post